Weftigii Wasiirka dib u dejinta oo la kulmay Jaaliyadda Somaliland ee Finland | Salaan Media
Weftigii Wasiirka dib u dejinta oo la kulmay Jaaliyadda Somaliland ee Finland
Finland(SM)- Weftigii Wasiirka Dib u dejinta Somaliland Mudane Saleebaan Ciise Axmed (Xagla-toosiye) ee maalmahanba ku sugnaa dalka Finland ayaa la kulmay jaaliyadda Somaliland ee ku dhaqan Finland.
Ugu horayna waxaa ka hadlay goobta Gudoomiyaha jaaliyada Somaliland Md Xasan Cali Sadexle oo ka jeediyey goobta hadalo soo dhawayn iyo mahadnaq ubadan.
Intaas kadib aya hadalka waxaa lasiiyey dhawr xubnood oo kamid ah Xisbiyada Qaranka Sida Xisbiga Waddani Ucid Iyo Kulmiye. Dhamantood waxay si-wanaagsan usoo dhaweeyeen imaatinka weftigan ay ku yimaaadeen dalka Finland iyo sida wanaagsan ay uqabteen hawlihi Xukuumada Somaliland usoo igmatay.
Dhanka kale waxaa warbixin kasoo jeediyey kulankan Gudoomiyihi hore ee hay’ada qurba jooga Somaliland, Md Saleebaan Maxamed Faarax warbixintaas oo ku qodontay Weftigu mudadi ay joogeen hawlihi uqabsoomeyey iyo kulamadi faraha badnaa ee ay galeen waxyaabihi kasoo baxay.
Weftigi oo uu hogaaminayey Wasiirka dib-udejinta Somaliland Md Suleiman Esse Ahmed ee ku sugnaa maalmihi ugu danbeeyey Dalka Finland. ayaa waxay kulanki maanta oo taariikhdu ahayd 19.4.2013 kasoo jeediyeeen hadalo qiimo badan, Wasiirka wasaarada dib-udejinta Somaliland Suleiman Esse Ahmed (Xagla-toosiye) ayaa waxaa uu uga waramay Jaaliyadda Somaliland ee wadanka Finland xaaladda guud ee dalkii Somaliland iyo gaar ahaan horumarka dhinac kasta ee ay samaysay xukuumadda Somalilland ee uu gadhwadeenka ka yahay Madaxweyne Ahmed Mohamed Siilaayo.
Kulanki galabta ee ay weftigu jaaliyada la yeesheen kadib ayaa waxaa loo sameeyey Casho sharaf Weftiga iyo xubno kamid ah waxgaradka dalka Finland oo ay si kooban ugu sheekaysteen, kunasii balameen iyadoo Wasiirku sheegay inay udiyaar garoobaan weftiyo intan ka balaadhan oo soo booqda Finland iyo wadamada udhawba Rer Finlana ay sii badiyaan dadaalka.
Gabi ahaan kulamadi kala duwanaa ee weftiga aya waxay ku dhamaan jawi ad uwanaagsan, hadana waxay usoo anbabaxayaan manta dalki Somaliland.
Kayse M M